आफ्नै कुरा: Oct 30, 2011
केही कुरा सीपी चौरका
ही दिनपछी आगो खरानी बन्ला कि भनेर हप्तादिन वितीञ्जेलसम्म पनि म घोत्लेको घर गइँन । स्थिती झन् बिग्रिएको छ र सबै दोष मै माथि लगाइएको छ भन्ने सुनेर म उसकै अनुरोधमा उसको घर पुगें । त्यसो त परिस्थितीवश दिनुपर्ने उत्तरहरु, तीनको विश्लेषण, मुल्याङ्कन एवं आलोचनाहरु शुत्रेसँग सि पि चौरमै भैसकेको हुनाले निर्धक्क म ढोका भित्र पसें ।
मुटुको तेज भित्रैदेखी बढीरहेको अनुभुती भैरहेको थियो । होस गुमाउनु मानवतालाई त्याग्नु सम्झने म सरासर भित्र पसे । आन्टी खाना बनाउन व्यस्थ हुनुहुन्थ्यो भने अंकल नजिकको आटमा बसेर चिया खाइरहनु भएको थियो । म केही बोलिन । ढोकामा उभिएर हेरीरहें ।
- "ओहो ! निक्कै पछी दर्शन पाइयो नि । के छ ?" आन्टीको अपेक्ष्याक्रित प्रश्न म माथि तेर्सियो ।
- "अँ , ठिकै छ । " उहाँको प्रश्नले मलाई उत्तर दिनमात्र नभै टुल तानेर थ्याच्च बस्न समेत साहस प्रदान गर्‍यो ।
- "चिया खान्छौ ?"
- " हैन । भर्खर मात्रै खाएको । "
- " त्यसो भए लौ चुरोट नै खाउ न त , सत्कार त गर्नै पर्‍यो नि हैन र ? " पसलको पैसा राख्ने कन्तुरबाट एक खिल्ली याक चुरोट झिक्दै भन्नु भयो । मैले योजनामुताविक उत्तर दिए - "हो तर मलाई अहिले खान मन छैन । "
सबै गुनासो सुन्छु र आफ्नो पनि बिचार राखेर आउँछु । लौरो, लात्ती , डाढु, पन्युँ आदिको पर्वाह गर्दिन भन्ने मानसिकता बनाएर गएको मलाई आन्टीको - "के भन्न आयौ भन त , के वाल्ल परेर बस्छौ ?" भन्ने प्रश्नले झन् जटिलतातर्फ धकेल्यो । ङिंच्च दाँत देखाउने अवसर मैले गुमाइँन । धेरै दिन भएको थियो, मैले आफ्नो दाँत ङिंच्च पारेर देखाउन नपाएको । मैले भने -" केही छैन । "
वातावरण एकछिन मौन रह्यो । सडकमा गाडीहरुको आउजाउ भैरहेको थियो । पानी परेर मात्र नत्र अगाडिको बाटोबाट उड्ने धुलोले घर भित्रको मान्छे भुतजस्तो भैसक्थ्यो । घर अगाडिको चिल्ड्रेन पार्कको ढोकामा केटाकेटीहरु चहै चहै गर्दै पिङ खेलीरहेका थिए । प्रेसर कूकरको सिट्ठीले म झस्किए । -"किन टोलाएको ?" आन्टीले सोध्नु भयो ।
-"त्यसै, केही हैन ।" मैले भनें ।
-"तरकारी खान्छौ ?"
-"के को तरकारी ?"
-"खाईहालौ न । "
मुखबाट फुत्त सहमतीको वाक्य झर्यो । मैले पहिले बहिरबाटै कहिले थर्कौउदै त कहिले दङग्यौदै भित्र पसेर प्लेट र चम्चा बजाउँदै तरकारी मागेको दृश्य मेरो आँखा अगाडि नाच्न थाले । समान्यमै म गम्भिर बन्न थालिसकेको थिएँ ।
उहाँले बिचमै झ्वाट्टै प्रश्न तेर्स्यौउनु भयो - " नढाँटिकन भन त, के तिमी पनि चुरोट खान्छौ ? " मैले म खाँदिन भन्दिन भनेर सोचिसकेकोले त्यही भनेँ । सबैकुरा सोचेअनुरुप नै भै'रहेको थियो । तर उहाँहरुले सोचेअनुरुप हामी बन्न सकेनौं । मलाई मन पोल्न थाल्यो ।
-" कति भयो ? "
-" भयो ४ - ५ महिना जती । "
-" नयाँ कलेज भर्ना भएदेखी ?"
-" अँ, त्यस्तै भयो । "
-" मैले त भनेकै थिए नि तिमीलाई " आन्टीले अंकलको मुख हेरेर भन्नुभयो -" यिनीहरुले नयाँ क्याम्पस पढ्न थालेपछी खान सुरु गरेका हुन् भनेर त, त्यो क्याम्पस साह्रै खत्तम रहेछ । "
-" पहिलेको क्याम्पसमा त खाँदैनथ्यौ होला नि हैन ?" पुन: एक पटक मलाई हेर्दै भन्नुभयो ।
-" अँ खाँदैनथ्यौ । " मलाई उत्तर दिन सजिलो भयो । "
-"अनी घोत्लेले त सात बर्ष भैसक्यो भन्छ त ?"
-"खै , त्यसले जे पनि भन्छ । अहिले त्यो जे पनि बोल्छ । त्यसलाई नै थाहा छैन होला कि त्यसले के बोल्यो भनेर । "
मैले घोत्लेको सामान्य बर्तमान मनसिक दुर्बलताको हल्का फाईदा उठाउने मौका पाएँ । जे होस् ता पनि उसैको भलाईमा उसैको असद्देताको सहारा लिनुमा मलाई दु:ख लगेन ।
-"त्यसैले त त्यो अस्ती म सँग त्यसै जङ्गीएको रहेछ त । 'के तपाईंले हाम्रो सात बर्षे मित्रता चुरोटको निहुमा छुटाउन खोज्नुभएको' पो भन्छ बा । अरुको छोराछोरी भए मलाई के मतलब तर तिमीहरु मलाई मेरै छोराहरुजस्तो लाग्छ र त सम्झाउछु र परेको बेलामा कुट्छु पनि । तिम्रो बुवाममीले पनि मेरो छोरालाई आफ्नै जस्तो ब्वहार गर्छन् । पाप सोच्न मिल्दैन । मान्छेले मर्नु पनि पर्छ । "
आन्टीले आफ्नो असन्तुष्टी ब्यक्त गर्नुभयो । त्यतिकैमा अंकलले थप्नुभयो -" म पनि तिमीहरुको मित्रताको कदर गर्छु । तर तिमीहरु स्वम ले पनि आफ्नो मित्रताको कदर गर्नुपर्छ । अरुलाई औंला उठाउने मौका दिनुहुन्न । मलाई थाहा थियो त्यसको बोलिमा सत्यता छैन भनेर । जे सोधेपनी सिधा र ठीक जवाफ कहिल्यै दिदैन । त्यसैले बरु तिमी नै एकपटक उसलाई सम्झाइदेउ न । "
आन्टीको यस्तो आग्रहले म अचम्म मात्र परिन, स्वम आफ्नो कानलाई समेत विश्वास गर्न गाह्रो पर्‍यो । आज म झगडा नै गर्नु परे पनि पछी पर्दिन भनेर गएको थिए । यदी अंकल आन्टीले हाम्रो मित्रतालाई तौलियर बोल्नुभएको खण्डमा म ठुलै च्यलेन्ज दिन्छु र त्यही प्रमणित गरेर फर्कन्छु भन्ने अठोट बोकेर गएको म , एकाएक मैन सरह पग्लन पो थाले । मलाई अझै पनि यात्रो विश्वास ? मैले भगवानलाई साधुबाद दिन करै लाग्यो ।
-" अनी तिमीहरु साथी भएर पनि त्यसलाई सम्झाउन सकेनौ त ?" आन्टीले त्यहा मलाई दोहोरो प्रश्न गरीरहनु भएको मैले प्रस्ट बुझे र चलाख भएर उत्तर दिए -"शुत्रे हामीबाट अली टाढा छ, तपाईंहरुलाई थाहै छ, उ एकदम ब्यस्त छ । " मेरो कुरै सकिन नपाउदै आन्टी विचमा मलाई सहमती जनाउदै भन्नुभयो -" विचरालाई खानेमुत्ने समेत फुर्सद छैन । " अनी म फेरी भन्दै गए -" उसलाई घोत्लेले चुरोट खान्छ खाँदैन नै राम्ररी थाहा छैन, अनी म म भै हाले । आँफै खान्छु । उसलाई कुन मुखले सम्झाउनु ?"
" अनी तिमीहरु बिग्रिदैनौ भन्थ्यौ त ?" कटाक्ष्यस्वरुप प्रश्नका बाढीहरु आउन थाले । "किन खायौ? टेन्सन परेर कि ट्राइजेडी परेर ?"
यस्ता सहज प्रश्नका सहज उत्तर दिएर म सहज रुपले पन्छिन चाहन्नथे । मैले घुमाउरो पाराले भन्दै गए -" मान्छेले टेन्सन परेकोले चुरोट खाएको भन्नु बाहना मात्र हो, त्यसमा मलाई अलिकती पनि सत्यता छ जस्तो लाग्दैन ।" फेरी विचमै आन्टीले पुन: सहमती स्वरुप थप्नुभयो -"त्यसो भए त म अहिल्यै एक बट्टा चुरोट खाइदिन्थे, निको हुने भएदेखी त ।" ममा बल थपीदै जान थाल्यो । म भन्दै गए -" ट्राइजेडी हाम्रो सम्भव छैन, किनकी लव नै परेको छैन । "
यसपालीको कुरामा भने उहाहरु एकछिन भएपनी मन खोलेर हास्नुभयो । धेरै दिन भएको थियो, त्यो घरमा हाँसो नछाएको । अन्ध्यारो, चिसो एवम निरासिलो घर एकाएक उज्यालो हुँदैगैरहेको थियो । तर पनि पूर्ण उज्यालो तवमात्र छ, जबसम्म उहाहरुको मनको बादल हटेर जानेछ । ढिलो चाडो तर अवस्य ति दिन आउने छन ।
-"वास्तवमा अहिले हामीलाई के भएको छ, स्वम हामीलाई नै थाहा छैन ।”म वास्तविकताको नजिकमा रहेर भन्दै गए -" हामीलाई अहिले काल आएको हो अरु केही होइन ।"
अंकलले मेरो भनाइलाई बल पुर्याउदै भन्नुभयो -" घोत्लेको चिना देखाउँदा ज्योतिषले यसलाई ग्रह लागेको छ, जे पनि हुन सक्छ भनेको हुँदा म चुप लागेर बसेको हुँ, नत्र । " अस्पस्ट तर भयानक आक्रोश उहाँको आँखामा झल्किरहेको थियो । त्यहा हाम्रो लहडमा भएको गल्तीलाई अर्कै हिसाबले हेरिएको मैले पाएँ । जे होस् अझै केही बिग्रिएको रहेनछ । म ढुक्क र शान्त हुँदै गएँ ।
"केटीसेटीको चक्करले हो भने भनीहाल, ल्याइहाल्नुपर्‍यो " आन्टीले अझै ठट्टा गर्न छोड्नुभएको थिएन । हल्का हाँसोले मलाई "ल्याउन त हुन्थ्यो तर अर्कैकी परि, आउन नमान्ली कि" भन्न साहस दिलायो ।
अब घरमा हाँसो असामान्य लाग्न थालेन ।
घोत्लेले बाहिरबाट चिहाएको मैले भित्रबाट स्पस्ट देखें । उसलाई म बाट ठुलो आश छ र डर पनि कतै कुरा बिगार्लाकी भनेर । मैले उसलाई जीवनमा पहिलोपल्ट दयाले हेरें ।
शुत्रे र घोत्लेमा म कसैको गल्ती देख्दिन । गल्ती समय र परिस्थितीको हो । शुत्रेले आज पठाएको चिट्ठीमा पनि त्यही भनेको छ । अहिले उ टाढा छ तर छिट्टै आउँदै छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वाश छ ।
म आफु पनि सनकी मान्छे । बिचरी फुच्चूको पनि केही दोष थिएन तर पनि उ सँग त्यसै खनिएँ । मैले यसबारे पछी उ सँग कुरापनी गरें । अहिले कुरा स्पस्ट भैसकेको छ । उ हाम्रो जती नजिक छे र हामी उसको जती नजिक छौ हाम्रो घरपरिवार बाट उ र उसको घरपरिवारबाट हामी त्यती नि टाढा छौ । उ सँग दु:ख पोखेर मन हलुका पार्नुबाहेक तत्काल उसबाट यस मामलामा केही सहयोग पाउन सक्दैनौं । यो हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ ।
कुरालाई सकभर छिट्टै बिट मार्न म आफ्नै कुरा भन्दै गएं -" चुरोट पिउनु हुन्न हामीलाई राम्ररी थाहा छ। यसले कस्तो कस्तो रोगहरु लाग्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ । र साथीभाइको संगतमा लागेर खाने हाम्रो उमेर पनि गैसक्यो । के राम्रो के नराम्रो छुट्ट्याउन सक्ने पनि भैसक्यौ । " आन्टीले आँखा पिलिक्क झिम्क्याउदै बिचमै हाँस्दै भन्नुभयो -" कुरा त यसले असाध्यै जानेको छ । " मैले आफुलाई रोक्न चाहिन र सायदै सत्त्य कुरा भनें -" तर पनि आन्टी कहिलेकाही यस्तो दिन पनि आउदो रहेछ, सब थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्हालिन नसकिने रहेछ । अहिले हामीलाई त्यही भएको हो, अर्थोक केही होइन ।
मैले हाम्रो वास्तविक समस्या जस्ताको तस्तै राखें । अंकल आफ्ना पहिलेका दिनहरु भन्न थाल्नुभयो । म उहाको छेवैमा गएर टुसुक्क बसें । अब चैं बुढाले मर्दैनन् भन्ने विश्वाश पलायर आयो । बुढाले अघीपछी राजनीतिका कुराहरु गर्दा सुन्न बसेंझैं गालामा हात लगाएर म सुन्दै गएं । उहाले भन्दै जानु भयो -" तिमीहरुको उमेर मैले पनि पार गरेरै आएको हो । यो उमेरमा सबैलाई यस्तै पर्छ । मलाई पनि 'ला एक सर्को त हो नि , तान् न तान्, मज्जा आउँछ ' भन्ने धेरै थिए । मैले पनि तिमीहरुको उमेरमा एक दुइ सर्को नतानेको होइन ।" मैले सुसुक्क हासेर आन्टीको मुखमा हेरें । एक्कासी बुढाले के सम्झेछन् कुन्नी आन्टीतर्फ जंगीगै भन्न भन्न थाल्नुभयो -" यसले त झन् ७ -८ बर्षमै स्कूल पढ्न जाँदा पुलमुनी बसेर चुरोट खान्थी , तिमीहरुले त भर्खर र छ । " हाँसोले एक छिन घर 'जिरे खुर्सानी' हेरेझैं भयो ।
बुढाको हरेक गफमा राजनीति घुसेकै हुन्छ । बुढासँग कुरा गर्न जानु पहिले आधाजसो राजनीति त जानेकै हुनुपर्छ । उहाँले अगाडि भन्दै जानु भयो -" तर हाम्रो त तिमीहरुको समय धेरै फरक छ । तिमीहरु पढेलेखेका छौ, भोली देश तिमीहरुकै काधमा आइपुग्छ । त्यसैले यस्ता झिनामसिना मोजमस्ती र कुलतमा लागेर आफ्नो भविष्य बिगार्नु हुँदैन । "
"शुत्रेले भनेको कुर ठिकै हो, चुरोट खानै नहुने भए त बन्ने नै थ थिएन नि । तिमीहरुले अहिले नखाएपनी पछी खान सक्छौ । त्यसबेला समय परिस्थिती अर्कै बन्न सक्छ । आँफै कमाउन सक्छौ, ब्वहारहरु बुझ्दै जान्छौ । तर अहिले नै छोरा टाइसर्ट लगाएर किताब च्यापेर क्याम्पस पढ्न जान्छ भन्ने आशमा बसेका हामी जस्ता बाबुआमाले अकाबिहानै सडकमा खुलेआम क्याम्पसड्रेसमै चुरोट तान्दै हिँडेको कसरी हेर्न सक्छन् ? मैले त्यतीनै खेर घोत्लेलाई बजाइदिन खोजेको थिएँ तर ठुलो भएको छोरालाई के हात हाल्नु भनेर छोडिदिए ।" उहाँको मन अमिलो भैसकेको थियो । म एकोहोरो सुनी बसें ।
"समाजमा हामीले कमाएको इज्जत छोराछोरीले बुझ्नु पर्छ । भोली समाज उसको हातमा हुँदा परिस्थिती अर्कै बन्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो । बाबु,शत्रु खोज्न धेर टाढा जानु पर्दैन , छिमेकमै छन् । भोली आउँला उठाउछन । फलनाको छोरा यस्तो , उस्तो भनी नानाथरी भन्छन । यति सम्मकी भोली छोरालाई केटी खोज्न जाँदा 'यसले त चुरोट खान्छ, के छोरी दिनु' भन्छन् । यस्ता कुरा खै तिमीहरुले बुझेको ? तिमी हरुले आफ्नो कर्तब्य भुल्नु भनेको शत्रु बलियो हुनु हो । छोराले मोजमस्ती गरोस् कसका बाबुआमाले नचाहलान् तर हामी भन्दा ठुलो समाज छ , मुल्य र मन्यताहरु छन् ।"
"यी मोराहरुसँग पनि के आदर्शका कुरा गरेको भन्या तिमीले पनि ? टेढपुच्छर ला'उने हैनन् भोली ।" भान्छाकोठाबाट अंकलको बिचारमा सधैंझै आन्टीको बिरोध यता कोठासम्म आइपुग्यो । " अनी अचेलभरी यो किन दुब्लाउदै ग'को त ? कि गाँजा पनि तान्छ ?" मैले प्रतिप्रश्न गरें -"खै, घोत्ले त अचेल म मोटाउदै ग'को छु भन्छ त ? "
"अनी तिमीहरु बेलुका बेलुका सधैं किन हराउछौ त ? " अब भने जटिल प्रश्न त्यर्सियो ।
"शुत्रेलाई प्राय: दिउसो भेट हुन्न, बेलुका आइपुग्छ। अनी यसो बाहिर तिर घुम्न गइन्छ । त्यत्ती हो । " मैले सतही जवाफ दिएँ ।
अंकल फेरी अगाडि भन्दैजानु भयो -" तिमीहरु विहान मर्निङ वाक गर्न नभ्याउने मान्छे साँझतिर घुम्न निस्कनु राम्रो हुन्छ । साथीभाइ भेट्घाट गर्नु, चिया खानु रमाइलो नै हुन्छ । हामी तिमीहरुको हरेक कृयाकलापलाई सकारात्मकरुपले हेर्छौ । तर हाम्रो विश्वाशको तिमीहरुले अनुचित फाईदा लिनु चाँही भएन । मलाई घोत्लेको अरु कुनै कुरामा गुनासो छैन । खानमा जे भए पनि सन्तोषी छ । काम जे जस्तो भन्यो छी , नाइ नास्ती , केही भन्दैन । घरको काम सब उसैले गर्छ । पढ्न पनि पढेकै छ । मामाघर तिर पनि उ 'राम्रो केटो'ले चिनिन्छ । हामी हाम्रो छोराहरुमा कुनै कमजोरी नहोस् भन्ने चाहन्छौ । तर मलाई एउटै कुरामा चित्त दुखेको छ , र त्यो हो - त्यसले चुरोट खाँदो रहेछ । "
कुर फेरी चुरोट मै आएर अड्कियो । मलाई आज सम्म चुरोट खाने बानी नराम्रो लाग्दैनथ्यो तर अंकलको अन्तिम भनाइहरु मेरो मनमा नराम्ररी बिझ्न पुग्यो । र यो कथा लेख्न बसें । यस्तो लाग्दैथ्यो - चन्द्रमामा सानो दाग छ, नत्र ।
साँझ ७ बजीसकेको थियो । मैले आन्टी सँग पूजाको लागि अलिकती पारीजातको फूल लियर घर फर्किंएँ । बाटोमा आफु स्वतन्त्र र निडर रुपले अघीपछी भन्दा बेग्लै हिँडाइको अनुभव गर्दै घर पुगें । सधैं बेलुका चुरोट खाएर आउथें, आज नखाइ आएँ । ममीलाई नडराइकन फूल दिएँ किनभने हिजोका दिनहरुमा जसो आज मेरो मुखमा चुरोट गन्हाउने श्वास थिएन ।